Yintoni iSlogan? Slogans of Famous Brands and their Evolution | Martech Zone
At DK New Media, isiqubulo sethu kukuba Sinceda iinkampani ukuba zihlangabezane namandla azo okuthengisa. Ingena kuluhlu olubanzi lweenkonzo esizinikelayo-ukusuka ekubonisaneni nemveliso, ukuya kuphuhliso lomxholo, ukuthengisa ngokuthengisa kwi-Intanethi… yonke into esiyenzayo kukuchonga izikhewu kwizicwangciso kunye nokunceda iinkampani ukuba zizalise ezo zikhewu. Khange siye kude siyokuthengisa, ukuphuhlisa ividiyo yentsholongwane okanye ukongeza i-jingle… kodwa ndiyawuthanda umyalezo owuthumelayo.
Isiqubulo sisiqubulo esingenakulibaleka okanye ibinzana elisetyenziswe kwezopolitiko, ezorhwebo, ezenkolo, nakwezinye iimeko njengokuphindaphinda umbono okanye injongo. Igama elithi isilogeni lisuselwe kwislogorn esasisisiTshetshi seScotland Gaelic kunye neIrish sluagh-ghairm tanmay (sluagh "umkhosi", "umphathi" + gairm "cry"). Kudla ngokubizwa izivakalisi zentengiso imigca yeethegi eUnited States okanye iintambo e-UK. Abantu baseYurophu basebenzisa le migaqo iziseko, utyikityo, amabango okanye ukuhlawula.
Ngaba ukhona okhumbula isiqubulo sethu? Akuthandabuzeki… andiqinisekanga nokuba iqabane lam leshishini liyazi ukuba sisilogeni sethu eso! Ngapha koko, ngaba ukho umntu okhumbula isiqubulo somntu? Kwi-infographic engezantsi ukusuka kwiBestMarketingDegrees.org, bahamba uninzi lweempawu ezaziwayo kunye neziqubulo zabo- kwaye andifumananga namnye. Ndicinga ukuba ezinye zilungile… hayi ngenxa ye-verbiage yazo kodwa ngenxa yemiyalezo engaphantsi iyathetha okanye izama ukuyithetha. Ngelixa ilogo kunye negama zisenza ukuba inkampani ichongwe, isiqubulo sinokuthetha ngakumbi kwinkcubeko nakwiziphumo abazizuzayo kubathengi babo.
U-McDonald's, umzekelo, ulwa nohlaselo olukhulu-oluvela kwimizi-mveliso yokutya, kwabona baqhankqalazi bemivuzo ephantsi, nakwintshukumo ezichasene nenkampani. Ewe kunjalo Ndiyayithanda! Isiqubulo sipeyinta umfanekiso ocacileyo. Abathengi bayi-lovin 'it, abasebenzi bayayithanda' kwaye ngamanye amaxesha abanini-sitokhwe nabo). Sisilogeni esifanelekileyo sokulwa nemeko engemva abalwa nayo ngosuku olunikiweyo. Yongeza imibala yabo eqaqambileyo, iivenkile ezicocekileyo, kunye neenkukhu zeenkukhu - kwaye nabani na oza nesiqubulo wenza umsebenzi omkhulu.
Oku kubonisa izivakalisi kunye nokuvela kwazo kweempawu ezaziwayo njengeFedEx, iVerizon, iMaxwell House, iDe Beers, iAvis, iNike, iLas Vegas, iWendy's, iBurger King, iMcDonald's, iPepsi kunye neCoca-Cola.
tags: umbonosisekoUkufaka uphawuUkumkani burgermabangococa colaIimayini zegolideUguquko lwezilogeniiziqubulo ezaziwayoFedExlas vegasMaxwell HouseMcDonald'snikeukuhlawulapepsisayinaezigxekaumtyaUmgca wethegiverizonwendysithini isilogeni
Ukuba ufuna Obunye ubungqina bokuba nefuthe leSelfowuni kwiShishini